Emọs 9 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
9 Ahụrụ m Jehova ka ọ nọ n’elu ebe ịchụàjà,+ o wee sị: “Tie ihe n’isi ogidi, ka ụzọ mbata niile wee mee mkpatụ. Gbujipụ isi ha, ha niile.+ M ga-ejikwa mma agha gbuo ndị fọdụrụ n’ime ha. Ọ dịghị onye n’ime ha na-agbapụ agbapụ nke pụrụ ịgbala. Ọ dịghịkwa onye n’ime ha na-agba ọsọ nke ga-alanahụ.+
2 Ọ bụrụ na ha egwuo ala wee banye n’ime Shiol, aka m ga-esi n’ebe ahụ kpụrụ ha;+ ọ bụrụ na ha arịgoo n’eluigwe, m ga-esi n’ebe ahụ kpụdata ha.+
3 Ọ bụrụ na ha ezoo n’elu ugwu Kamel, m ga-achọ ha nke ọma n’ebe ahụ. M ga-ejiderịrị ha.+ Ọ bụrụkwa na ha ezoo n’ala ala oké osimiri+ ka m ghara ịhụ ha, m ga-enye agwọ iwu ka ọ taa ha n’ebe ahụ.
4 Ọ bụrụ na ndị iro ha adọrọ ha n’agha, m ga-enye mma agha iwu ka o gbuo ha n’ebe ahụ;+ m ga-eme ka anya m dị n’ebe ha nọ iji mee ha ihe ọjọọ, ọ bụghị imere ha ihe ọma.+
5 Ọ bụ Ọkaakaa Onyenwe anyị, bụ́ Jehova nke ụsụụ ndị agha, kpara ala a aka, o wee gbazee;+ ndị niile bi n’ime ya ga-eru uju;+ ọ ga-etokwa dị ka osimiri Naịl, talatakwa dị ka osimiri Naịl nke Ijipt.+
6 “‘Onye na-arụ ebe e si arịgo n’eluigwe,+ na-ewukwa ihe owuwu ya n’elu ụwa nke ọ tọrọ ntọala ya;+ onye na-akpọ mmiri nke oké osimiri òkù,+ ka o wee wụsa ya n’elu ala+—Jehova bụ aha ya.’+
7 “‘Unu ụmụ Izrel, ọ̀ bụ na unu adịghị ka ụmụ Kush n’anya m?’ ka Jehova kwuru. ‘Ọ̀ bụ na mụ esighị n’ala Ijipt kpọpụta ụmụ Izrel,+ si na Krit kpọpụta ndị Filistia,+ sikwa na Kia+ kpọpụta Siria?’
8 “‘Lee! Anya Ọkaakaa Onyenwe anyị Jehova na-ele alaeze nke na-eme mmehie.+ Ọ ga-ekpochapụkwa ya n’elu ala.+ Ka o sina dị, m gaghị ekpochapụ ụlọ Jekọb kpamkpam,’+ ka Jehova kwuru.
9 ‘N’ihi na, lee! m na-enye iwu, m ga-ayọgharịkwa ụlọ Izrel n’etiti mba niile,+ dị ka mmadụ si ayọgharị myọ, ma otu obere okwute agaghị ada n’ala.
10 A ga-eji mma agha gbuo ha, ya bụ, ndị niile na-eme mmehie n’etiti ndị m,+ bụ́ ndị na-asị: “Ọdachi ahụ agaghị abịaru anyị nso ma ọ bụ rute n’ebe anyị nọ.”’+
11 “‘N’ụbọchị ahụ, m ga-ebuli+ ụlọ ndò+ Devid nke dara ada,+ m ga-edozikwa ebe ndị a kwadara akwada. M ga-ewu mkpọmkpọ ebe ya, m ga-ewuli ya elu dị ka ọ dị n’ogologo oge gara aga,+
12 ka ha wee weghara ihe fọdụrụ n’Idọm,+ tinyere mba niile a kpọkwasịrị aha m,’+ ka Jehova kwuru, bụ́ onye na-eme ihe a.
13 “‘Lee! Ụbọchị na-abịa,’ ka Jehova kwuru, ‘mgbe onye na-akọ ihe ga-ejekwute onye na-ewe ihe ubi,+ onye na-azọcha mkpụrụ vaịn ga-ejekwutekwa onye bu mkpụrụ ọ na-agha;+ mmanya dị ụtọ ga-esi n’ugwu ukwu na-atapụta,+ ugwu nta niile ga na-agbazekwa.+
14 M ga-akpọkọta ndị a dọọrọ n’agha n’ime ndị m Izrel.+ Ha ga-ewukwa ebe ndị tọgbọrọ n’efu ma biri n’ime ha,+ kọọ ubi vaịn ma ṅụọ mmanya ha, kọọkwa ubi ma rie mkpụrụ ha.’+
15 “‘M ga-akụ ha n’ala ha dị ka mkpụrụ. A gaghị efopụkwa ha ọzọ n’ala ha nke m nyere ha,’+ ka Jehova bụ́ Chineke unu kwuru.”
mailto:?body=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D1011452%26Book%3D30%26Chapter%3D9%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl